Mitarika Ireo Mpisera Haneho Fankasitrahana Ho An’ny Mpiasa Vahiny Ny Praiminisitra Ao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2017 7:52 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, bahasa Indonesia, русский, Español, English
Sary avy amin'ny pejy Facebook ofisialin'ny Praiminisitra Lee Hsein Loong
Lasa nalaza sy nanome aingam-panahy maro ireo mpisera aterineto mba handinika ny anjara asa manan-danjan'ireo vahiny ao amin'ny fiarahamoniny ny lahatsoratry ny Praiminisitra Singapaoreana Lee Hsein Loong tao amin'ny Facebook izay midera ireo mpiasa vahiny.
Nandefa ny sarin'ny mpiasa vahiny iray hitany tao amin'ny tora-pasika Changi i Lee nandritra ny faran'ny herinandron'ny taombaovao .
Misy soratra toy izao ny sary:
Rehefa mankafy ny andro fety miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana isika, dia aoka ahatsiaro ireo vahiny mpiasa, izay nandao ny fianakaviany noho ny asa any an-tany lavitra. Manangana ny HDB [fonena]-ntsika sy ny làlan'ny MRT [fiaran-dalamby] izy ireo, manadio ny lalantsika sy mikarakara ny zaridaina maitso, ary mikarakara ny tanora sy ny zokiolona. Miasa mafy izy ireo ary manangom-bola hanohanany ny fianakaviany, kanefa rehefa misy ny aterineto sy ny finday afaka hifandraisana farafaharatsiny dia tsy mahatsapa tena ho lavitra loatra ry zareo.
Tamin'ny nanoratana ity lahatsoratra ity, efa nahazo ekeko Facebook miisa 37.000 ny lahatsoratra, sy zara miisa 3.500 ary fanehoan-kevitra arivo mahery.
Mampiantrano mpiasa vahiny voasoratra anarana miisa 1,3 tapitrisa i Singapaoro . Ny 200.000 mahery amin'ireo no mpiasa an-trano, na asa hafa ao an-trano, indrindra fa avy any amin'ny firenena manodidina toa an'i Filipina, Indonezia, Myanmar, ary India. Tato anatin'ireo taona faramparany, navoakan'ny tatitra [mg] ny momba ireo mpiasa an-trano miaina fampijaliana avy amin'ny mpampiasa azy. Miha-maro ireo tranga fanararaotana, na dia eo aza ny lalàna vaovao natao hiaro ny zon'izy ireo .
Ny fampialofana misy ho an'ireo mpiasa mpifindra monina sasany ao Singapaoro. Sary avy amin'ny pejin'i Rob O'Brien tao amin'ny Flickr , CC License.
Maro no nidera an'i Lee noho ny fankasitrahany ny fandraisan'anjaran'ireo mpiasa mpifindra monina ao Singapaoro. Selina Xu izay nanoratra ity fanehoan-kevitra ity tao amin'ny Facebook no iray tamin'ireo izay nankasitraka ny hafatr'i Lee , :
Misaotra anao Atoa PM Lee! Tena faly aho fa niantso hijerena vondron’ olo-maro matetika tsy raharahiana na tsy jeren'ny fiarahamonintsika ianao – dia mpiasa mpifindra monina eto amintsika izay misasatra mba hanome endrika an'i Singapaoro. Kanefa tsy misy mihaino indraindray ny manjo azy sy ny fitarainany, ary tsy araka ny tokony ho izy ny fankasitrahana ny halehiben'ny fandraisana anjaran'izy ireo hanatsarana ny tanàndehibe goavana .
Nizara ny sarin'i Lee i Angel Ting ary niangavy hisian'ny fiaraha-mizaka ny fahatsapan'ireo mpiasa mpifindramonina eo amin'ny fiainana andavanandro fa tsy ao amin'ny media sosialy fotsiny ihany:
… tohina avy amin'ny tenin'ny PM be fitiavana. Vao mainka nanohina ny fanehoan-kevitr'ireo vahiny sy Singapaoreana. Firenena heniky ny fifandraisana eo amin'ny mpiray foko, kanefa manantena fa ho maro kokoa no hiseho mihoatra noho ny ao amin'ny media sosialy fotsiny…
Nanamarika i Jolovan Wham, mpikatroka, fa na dia eo aza ny fanambarana mitovitovy amin'izany teo aloha nataon'i Lee mikasika ny fikarakarana ireo mpiasa mpifindramonina, dia “mbola asa anjorombala ny fampiroboroboana ny rariny ho an'ny mpiasa mpifindramonina ” ao Singapaoro.
Tsy vao voalohany izao ny PM no nidera ny fandraisana anjaran'ireo mpiasa mpifindra monina – ary tokony hanao izany izy satria hitotongana ny toekarentsika raha manao fitokonana izy rehetra ireo. Na izany aza, tsy tokony hijanona ao amin'ny lahatsoratra mafana sy manjavozavo ao amin'ny FB ny fankasitrahana fa tokony hivadika politika mivaingana eo amin'ny fiainan'izy ireo, izay azon'ny governemantany hatao tsara fa ny finiavana ara-politika no tsy ampy.
Nananatra ny antoko mpanohitra ihany koa ny mpitarika ao amin'ilay fikambanana tsy miankina na ONG tamin'ny tsy fahombiazana nanao laharam-pahamehana izay hahasoa ireo mpiasa mpifindra monina:
Na dia ireo antoko mpanohitra aza dia tsy tia niresaka fikarakarana mpiasa mpifindra monina satria tsy ahazoam-bato izany. Maro no matahotra raha hita ho “mpomba ireo vahiny”, kanefa tsy mahatsapa fa ahazoan'ny mpifidy tombontsoa ihany koa ny zon'ny mpiasa manerantany.